သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာထုတ်လုပ်မှု, ရောက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်အာဏာပိုင်လား? | Martech Zone
သောကြာနေ့, မေလ 8, 2015 Douglas Karr
ငါမကြာခဏလူတွေအကြောင်းပြောပြနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဂျင်စီ ငါတို့ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟုတ်ဘူး Jiffy Lube။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မှာသင့်ကိုမြန်မြန်ထွက်ခွာသွားရန်၊ သင်၏ရှေ့မျက်နှာပြင်တွင်စတစ်ကာတစ်ခုနောက်လာမည့်လတွင်သင့်ကိုတွေ့ရန်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာသင်္ချိုင်းတွင်းမှာအမှုထမ်းနေတဲ့သူတွေထက်ကားကိုအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်နေပြီ။ အဲဒီမှာ Jiffy Lubes အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်မဖြစ်ချင်ကြဘူး။
အကြောင်းအရာကိုရည်ညွှန်းသည်နှင့်အမျှဤအေဂျင်စီများသည်သင့်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုပေးသည်။ တစ်လလျှင်ပို့စ်အရေအတွက် X၊ ငွေစက္ကူအရေအတွက် X၊ ငွေကြေးတန်ဖိုး X ဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိအချက်အလက်အစက်အပြောက်များ။ အဆိုပါစာချုပ်စတင်နှင့်သူတို့ထုတ်လုပ်ရန်။ သင်ဟာပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရမလားဆိုတာကိုဂရုမစိုက်ဘဲစီမံကိန်း၏ရလဒ်နှင့်အချိန်ကိုက်မှုအပေါ်သူတို့ကပေးဆပ်ကြရသည်။
ကုမ္ပဏီများစွာသည်ဤနည်းဗျူဟာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာပထမတစ်ခုမှာပုံမှန်စီးဆင်းမှုကိုလိုချင်သော copywriters များစွာနှင့်ဒုတိယဖြစ်သည် - ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာကိုပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ရှုံးနိမ့်နေကြောင်းကိုမသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရန်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဂရုမစိုက်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဆက်လက်ဆုံးရှုံးနေကြသည်။
အေဂျင်စီအမြောက်အများဖြန့်ကျက်ထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်သည့်ဒုတိယနည်းဗျူဟာမှာ အသံဝေစု or ဝက်ဘ်ရှိနေခြင်း မဟာဗျူဟာ။ ဒီမှာပါဝင်မှုနှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့ပါ ၀ င်သည်။ စည်းကမ်းချက်များသည်သင်ပိုမိုရေးသားပြီးပိုမိုမြှင့်တင်ပါကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသင်အဝင်အတွင်း၌ပိုမိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ Ack ... အချိန်ဖြုန်းတီး။ သင်၏အသံတိုးပွားလာခြင်းကသင့်ကို ပို၍ ဦး ဆောင်မှုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ငါကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာကို poo-pooing လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအပေါ်အတိုချုံးပြန်ပေးသည့် linear ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ပျမ်းမျှထုတ်ကုန်နှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်စည်းဝေးပွဲကိုလိုင်းပါပဲ။
ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအကြောင်းအရာများကိုရေးသား။ တိုး။ တိုး။ ဝယ်လိုအားကိုအဆတိုးမြှင့်နိုင်လျှင်သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တယ် အကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာချဉ်းကပ်မှု ဖောက်သည်များနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ရေနံပြောင်းလဲမှုကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းများမဟုတ်ပါ။ ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ကားကိုတည်ဆောက်ပြီးတဲ့နောက်မင်းကိုရှုံးနိမ့်တိုင်းတွင်းထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်။
၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အမြတ်တိုးလာမှုနှင့်အတူကြားဖြတ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ရောင်းချတဲ့ Premium ထုတ်ကုန်နဲ့နှေးကွေးတဲ့ assembly line ပဲ။
ပြီးခဲ့သည့်ညကငါတက်ရောက်ခဲ့သည် Big Data ညီလာခံ ဒီမှာ Indianapolis ၌တည်၏။ တက်ရောက်သူတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်ကိုမဆောင်မချင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအမှုဆောင်ခဲ့သောဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာသည်အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုနောက်ခံရှိခဲ့ပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းထက်ဘရိုရှာအဖြစ်သာရှုမြင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီသည်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုရေးမှတစ်ဆင့်၎င်း၏အခွင့်အာဏာများစွာဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းကုမ္ပဏီမှအရောင်းစာရေးကပြောကြားခဲ့တာကတော့၊ သတင်းအချက်အလက်စီးရီး ငါတို့ကုမ္ပဏီအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်3လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ဝဘ်ကနေတဆင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အားအရှိဆုံးရင်းမြစ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ဒါကဒီမှာပြောနေတာပါ။ သငျသညျယနေ့ပိုမိုပေးဆောင်ပေမယ့်သင်အချိန်ကျော်အဆအဆပိုကောင်းရလဒ်များကိုရ!
Buzzoole: အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အတူစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Execute
မေလ 9, 2015 မှာ 5: 45 AM
အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များစွာပါရှိသော အကောင်းဆုံးဆိုက် Douglas။
မင်းရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းလွှာကို အခုပဲ စာရင်းသွင်းလိုက်ပြီ။
မေလ 11, 2015 မှာ 3: 48 pm တွင်